Rikoooo 777-200ER iko mara mma
Rikoooo 777-200ER iko mara mma 8 ọnwa 2 izu gara aga #1526
Ndewo, onye ọ bụla maara ụzọ ọ ga - eji kpochapụ windo VC achara mara mma?
Rikoooo 777-200ER iko mara mma 8 ọnwa 2 izu gara aga #1532
Ive hụrụ okwu a tupu oge ahụ yana onye mepụtara ụgbọ elu ahụ kwuru na ọ bụ akara aka ya nke ị ga - abanye na nhazi nke onwe ya ma wepụ ya iji mepụta nke gị. O siiri m ike nke ukwuu, m hapụrụ ya ka ọ dịrị. Ndo, enweghị m ike ịkọwapụta ya.
Rikoooo 777-200ER iko mara mma 8 ọnwa 2 izu gara aga #1534
Daalụ, Aga m ahapụ ya mgbe ahụ!
Rikoooo 777-200ER iko mara mma 8 ọnwa 1 ụbọchị ago #1540
Nke a bụ njikọ nke otu faịlụ na Simviation.com (nwee olileanya na ọ dị mma biputere nke a) ga-enyere aka, belụsọ na visor ihe ahụ dị ọzọ na windo ziri ezi. Ọ na-arụ ọrụ n'ime P3D v4
simviation.com/1/search?submit=1&keyword...turesp3d& udiId =
Ndumodu ikpe azu: site Flight.
Rikoooo 777-200ER iko mara mma 8 ọnwa 1 hour ago #1544
Daalụ maka njikọ ahụ!
Anwalewo m ya FSX-SE ma ọ kwusiwo windo mkpọchi na-efe efe.
Rikoooo 777-200ER iko mara mma 4 ọnwa 1 izu gara aga #1687
You na-ezo aka na agba agba agba agba odo ahụ? Ọ bụrụ otu a, m jisiri ike gbanwee ya ka ọ bụrụ ihe ka mma. N'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri enwere m ike ịgbanwe ya ka ọ bụrụ tint gbara ọchịchịrị, mana ọ nweghị edo edo ọzọ.
Oge ike page: 0.293 sekọnd